Myat Shu - 2011 November
Myat Shu eZine
ဟိုတစ်စ သည်တစ်စ အတွေးများ
You are here : Myat Shu » Archives for November 2011
ရသနဲ့ သုတ၊ နည်းပညာနဲ့ သဘာဝ၊ အဟောင်းနဲ့ အသစ်၊ ယခင်နဲ့ ယခု
Published By Myat Shu On Tuesday, November 29th 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, အက်ဆေး
မျက်ရှုကနေ နှစ်ပတ်လည်အတွက် စာတပုဒ်လောက် ရေးပါလို့ ပြောလာသည်။ တကူးတက စာမူတောင်းရအောင် ၊ ကိုယ်ကလည်း ဘာကြီးမှ မဟုတ်နေပါလား။ မျက်ရှု ဆိုတာကရော..ဘာလေးမို့လဲ ။ မျက်ရှုဆိုတဲ့.. စာမျက်နှာလေးကို.. ခုတလော ဟိုမှာ ဒီမှာ တွေ့ရင်း ပုံမှန်လို ၀င်ဖတ်ကြည့်နေတာတော့ ကြာပြီ။ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ အနုပညာ စာပေ လက်ရာ အဟောင်းလေးတွေလည်း တွေ့ရတတ်သည်။ ဖတ်ချင်စရာ ၊ ရသ - သုတ စာပေလေးတွေလည်း အကြောင်း စုံသည်။ သတင်းလေးတွေလည်း ကြိုကြား တွေ့ရသည်။ ခေတ်ပေါ် နည်းပညာကို အသုံးချပြီး စုစုစည်းစည်း အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်းလေးတခု အမြုတေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ၊ သူ တို့တွေက ... Continue Reading
ခဲစာလုံးဖြင့် စာစီခြင်း (၂)
Published By Myat Shu On Tuesday, November 29th 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
မြန်မာ စာလုံးပုံစံ (Font) မှာလည်း ခေတ်ကာလအလိုက် ပြောင်းလဲလာသည်ကို ဥပမာ ၃ ခုဖြင့် ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဥပမာ (၁)။ ၂၁-၁၀-၁၉၃၉ နေ့ထုတ် ဂျာနယ်ကျော် စာစောင်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် စာလုံးပုံစံ (Font) ဥပမာ (၂)။ ၂-၈-၁၉၇၁ နေ့ထုတ် ဟံသာဝတီ သတင်းစာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် စာလုံး (Font) ဥပမာ (၃)။ ဟိန်းလတ်၊ သိစိတ်စီကြောင်း ဖြစ်တည်မှုသစ် ပဉ္စလက် သရုပ်မှန်နှင့် စာပေအနုပညာရေးရာ စာအုပ်၏ ၁၉၉၄ ဇွန်လပုံနှိပ်ခြင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် မြန်မာစာလုံး (Font) အထက်ပါ ၁၉၃၉၊ ၁၉၇၁၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ် မြန်မာစာလုံးများကို ဖော်ပြထားသည့် ဥပမာ ၃ ခုတွင် ဥပမာ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, November 28th 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, သူတို့အာဘော်
(၁) ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ဖတ်စာအုပ်တွေကို လွမ်းတာ ကောင်းတယ်လိုတော့ ထင်တာပါပဲ။ လွမ်းစရာကောင်းလို့ လွမ်းတာလို့လည်း ထင်ပါတယ်။ လွမ်းစရာရှိမှ လွမ်းကြတာ မဟုတ်ပါ။ သူငယ်တန်းလောက်မှာ သင်ပုန်းကြီး ကုန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ ပထမတန်းလောက်မှာ ဖတ်စာတွေ စရပြီ။ Primary Reader ဆိုတာကို မူလတန်းဖတ်စာလို့ ဘာသာပြန်လေ့ရှိကြတယ်။ အမှန်တော့ အခြေခံဖတ်စာပါ။ အဲဒါကို ဆရာကြီးဖေမောင်တင်တို့က မူလတန်းမြန်မာကြည့်စာလို့ သုံးပါတယ်။ အလွန်ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာကြည့်စာမှာ ကျေးတောရွာအကြောင်းဆိုတာမျိုး စာပိုဒ်တိုလေးတွေပါတယ်။ ပုံပြင်လေးတွေပါတယ်။ ပြည်သူ့နီတိတို့ ယဉ်ကျေးလိမ္မာတို့နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆုံးမစာကဗျာလေးတွေပါတယ်။ သံပေါက်လို လင်္ကာကဗျာလေးတွေ ပါတယ်။ ပြီးတော့ သတ်ပုံသံပေါက်တွေ ပါတယ်။ အဲဒီခေတ်တုန်းကလည်း အခုလိုပါပဲ။ ကျောင်းသားလေးတွေဟာ (ဖတ်စရာကလည်း နည်းသေးတော့) စာတစ်အုပ်လုံး ... Continue Reading
ဒေါ်သန်းအေးရေးသားသော “စု” နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း (၂)
Published By Myat Shu On Monday, November 28th 2011. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ထဲတွင် မြန်မာပြည် အခြေအနေများကို ကျမတို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေး၍ရသော မိတ်ဆွေတဦး ပါဝင်ပါသည်။ ထိုမိတ်ဆွေက “စု”၏ ဝေဖန်ချက်များ သိပ်ရဲလွန်းသည်ဟု ယူဆသော အခါများ၌ 'စု' က ယုံကြည်ချက်အရ သတ္တိရှိရုံမက၊ အဆက်အနွယ် အရလည်း သတ္တိရှိတာကိုး ဟု နောက်ပြောင်လေ့ရှိ၏။ သူဆိုလိုသည်မှာ 'စု' ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဒေါ်ခင်ကြည်တို့၏ သမီးဖြစ်သဖြင့် တော်တော်နှင့် နှိမ်လို့ရမည် မဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျမ အထင်မှာတော့ 'စု' သည် သွေးသားအရထက် စိတ်ဓာတ်အရ သူမ မိဘနှစ်ပါး၏ သမီး ပီသပါပေသည်။ ကုလသမဂ္ဂရုံး၌ သုံးနှစ်ကြာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် 'စု' ဆက်လက် တာဝန်မထမ်းတော့ဘဲ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, November 27th 2011. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
(၁) “ပုထုဇနော ဥမ္မာတကော” ဟူသည့် ဂေါတမဗုဒ္ဓ၏ စကားအရ “လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဘ မီးအလျှံ တို့ဖြင့် လောင်ကျွမ်း ငြိတွယ် နေကြကုန်သော ပုထုဇဉ် လောကီလူသား မှန်သမျှသည် အရူးများသာ ဖြစ်သည်” ဟူ၏။ ထိုစကားကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ကြားဖူးကြပြီး ဟုတ်ပါပေ၏ မှန်ပါပေ၏ ဟူ၍ အမြဲတစေ ရေရွတ် ပြောဆိုလေ့ ရှိသော်လည်း ထိုသူတို့အား “အရူး” ဟု ခေါ်ဆို သုံးနှုန်းလိုက်လျှင် စော်ကားမော်ကားလုပ်သည်ဟု ထင်မြင်ကြသည်မှာ ဓမ္မတာပင် ဖြစ်သည်။ စော်ကားခံရသည်ဟု အထင်ရောက်ခြင်းမှာ အရူးစင်စစ် မဖြစ်သေးသောကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ အရူးစင်စစ် အဖြစ်ကြီး ဖြစ်တော်မူသည့် ဥမ္မတကတို့ကို “ဟဲ့ အရူး” ဟု ... Continue Reading
ကျိုက္ကသာ (သို့မဟုတ်) အမေ့လျော့ခံမြို့ဟောင်း
Published By Myat Shu On Sunday, November 27th 2011. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
(၁) “ကျိုက်ကသာ အရပ်ဒေသသည်ကား ကျိုက်ထို စစ်တောင်း မြို့နှစ်မြို့ စပ်ကြား၌ ရှိ၏။ ၎င်း အရပ်လူတို့သည် သွားတော်ဓာတ် တဆူရသည်အတိုင်း မိမိတို့ ဒေသတွင် ဌာပနာ၍ စေတီ တည်လုပ် ကိုးကွယ်ထားကြ၏။ သုဓမ္မ၀တီမင်းမြတ်လည်း ကိုယ်တိုင်တော် ရွှေစကြာ ဖြန့်ချီ ကြွရောက်ပြီးကာလ ကြပ်မတ်တော်မူ၏။ ထိုအခါ သာသနာ သက္ကရာဇ် ၂၃၇ ခု ဖြစ်၏။ သွားတော်ဓာတ် ဌာပနာသော စေတီတည်သဥ့် ကွင်းစပ်နားက စေတီဘုရားကြီး ဖြစ်၏။ ၎င်းပြင် သာသနာတော် ၁၆၀၁ ခု ကောဇာသက္ကရာဇ် ၄၁၉ ခု၌ နော်ရထာမင်းစော သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်ကို တိုက်ပြီးကာလ ပိဋကတ် ကျမ်းဂန် အကုန်နှင့် မွန်ရဟန်းပေါင်း ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Sunday, November 27th 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, အက်ဆေး
ညသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် အိုမင်းလာသည့် ကောင်းကင်ထက်တွင် လမင်းဝိုင်းပြည့်ပြည့် ပွင့်လန်းထိန်ညီးနေသော်ငြား နီယွန်ရောင်စုံမီးတို့ စုံညီနေသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် လရောင်ကို ပြည့်ဝစွာ မခံစားနိုင်ခဲ့….။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည ဆိုတာကို အမှတ်ရမိ သည့်အခိုက် မီးရောင် ပြောက်တိပြောက်ကျားသာ တွေ့ရတတ်သော ဇာတိမြို့ကို ရုတ်တရက် လွမ်းလာသည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် သုံးခုကျော်က သူမမိခင်သည် ယခုလို တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ပဲ မကြာမီ ရက်အနည်းငယ်တွင်း လူ့လောကတွင်း ၀င်ရောက်လာမည့် သူမကို ရင်တွင်း လွယ်ထားခိုက် လရောင်ဖမ်းစားမှုကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားနေချင်နေလိမ့်မည်...။ သူမကကော.... ဘေးတွင် အပြစ်ကင်းစင်စွာ အိပ်မောကျနေသော သမီးငယ်လေး၏ ပါးပြင်အိအိလေးကို ငုံ့နမ်းရင်း သူမ မိခင်ကို ပြင်းပြင်းပြပြ လွမ်းဆွတ်လာသည်။ အမေ ... Continue Reading
ပါတော်မူပြီးနောက် ၁၂၆ နှစ်၊ ရွှေကညစ်နဲ့ ရေးကာ စာကိုစီ
Published By Myat Shu On Tuesday, November 22nd 2011. Under မျက်ရှု, ခေတ်ဟောင်းတေးများ
ပါတော်မူသီချင်းကို ဆရာရွှေတိုင်ညွှန့်က ရေးပါသည်။ စိန်ပါတီက ဆို၏။ ကိုလံဘီယာဓာတ်ပြား အမှတ် V.E. 698 ဖြစ်ပြီး ၁၉၃၉ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အသံသွင်းသည်။ ပါတော်မူသီချင်းတွင် “မြန်မာပြည်.. ဇာတ်လမ်းရှုပ်သမျှကို ရွှေကညစ်နဲ့ ရေးကာ စာကိုစီ၊ ရာဇဌာနီ.. မြနန်းအရုပ်ဇာတ်မှာ… ဧကရာဇ်နဲ့ ဝေးတာကြာလေပြီ၊ တစ်ထောင့်နှစ်ရာလေးဆယ်… ခုနစ်ခုနှစ်မှာ အတည်…၊ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ရှစ်ရက်နေ့ကိုတော့ မမေ့နိုင်ပါပြီ၊ ယနေ့တိုင်ပြီ… ရေမြေ့ရှင်ကို ယူငင်သွားတော့ လူရှင်များတို့က ကြေကွဲကြလို့ ရေနည်းငါးပုံညီ… သြော်.. သီပေါရာဇာ ပါတော်မူရှာသည်” ဟု ဆိုလေရာ နားထောင်ရသူအပေါင်း ဆို့နစ်ကြရသည်။ “ပါတော်မူ” သီချင်းနှင့် တွဲဖက်ပြီး နားထောင်ရန် ရည်ညွှန်းပေးချင်သည်က စိန်ပါတီ၏ “ရွှေပြည်ကြီး” ... Continue Reading
ဒေါ်သန်းအေးရေးသားသော “စု” နှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း (၁)
Published By Myat Shu On Tuesday, November 22nd 2011. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
ဒေါ်သန်းအေး ပညာတော်သင်အဖြစ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေစဉ် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူမသည် ဒေါ်ခင်ကြည်၏ မိတ်ဆွေဖြစ်လာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဘဝတစ်လျောက် လုံးတွင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးသူ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်သန်းအေးကို ထိုခေတ်က အဆိုတော် 'ဘိလပ်ပြန်သန်း' ဟု လူသိများခဲ့သည်။ ဆရာမအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးသောအခါ ကမ္တာ့ကုလသမဂ္ဂတွင် အမှုထမ်းသော ထမဦးဆုံး မြန်မာအမျိုးသမီး ဖြစ်လာသည်။ ကုလသမဂ္ဂတွင် နှစ်ပေါင်း (၂၅) နှစ်ကြာ အမှုထမ်းပြီးနောက် အငြိမ်းစားယူကာ ယခုအခါ သြစတြီးယားနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ ********** စတြာစ်ဘောက်မြို့ (Strasbourg) ဍ္ဍ် (၁၂) နိုင်ငံပါဝင်သော ဥရောပပါလီမန်သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ... Continue Reading
ခဲစာလုံးဖြင့် စာစီခြင်း (၁)
Published By Myat Shu On Monday, November 21st 2011. Under တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်, မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
ပုံနှိပ်ခြင်း အတတ်ပညာသည် ဘီစီ ၃၀၀၀ ခန့်ကတည်းက မက်ဆိုပိုတေးမီးယား (ယနေ့ခေတ်တွင် အီရတ်၊ ဆီးရီးယား အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ တူရကီအရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် အီရန် အနောက်တောင်ပိုင်းတို့ ပါဝင်သောဒေသ) တွင် စတင်သည်ဟု ပညာရှင်များ သတ်မှတ်ထားကြသည်။ ရွှံ့ပြား၊ စဉ့်ပြားများပေါ် သင်္ကေတများ ရေးခြစ်ပြီး အခြောက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပုံနှိပ်လိုသည်များကို သစ်သားပြားပေါ် ထွင်းပြီး အ၀တ်စ၊ ပိုးထည်စများပေါ် ဖိနှိပ်ပုံပေါ်စေသည့် (woodblock printing) ပုံနှိပ်ပညာကို အာရှတိုက် အရှေ့ပိုင်းတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်။ တရုတ်ပြည်တွင် ဘီစီ ၂၂၀ ခန့်က ပိုးထည်စအပေါ် ပုံနှိပ်ထားသည့် သက်သေကို အစောဆုံး အထောက်အထားအဖြစ် ပညာရှင်များက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တရုတ်တို့သည် စက္ကူထုတ်လုပ်သည့် အတတ်ပညာကို ... Continue Reading
မန္တလေး.. ကျွန်တော်တို့ ရွှေမန္တလေး
နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှ စ၍ သုံးသိန်းတန် GSM ဖုန်းများ ချထားပေးမည်
စုံလင်ကဏ္ဍ သုတရသ အဖြာဖြာ
ဂါမ၀ါသ ဂဏိတ ပိဋကတ်တိုက် ခေတ်ပြောင်း တော်လှန်ရေး
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြု ဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ရေး စနစ်
မြ နဲ့ မောင်
Copyright © 2018 Myat Shu All Rights Reserved